အိပ်ခန်းကြမ်းပြင်အတွက်ဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးသလဲ။ - ZD ကြမ်းပြင်ကျွမ်းကျင်သူ
နေအိမ် > အိပ်ခန်းကြမ်းပြင်အတွက်ဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးသလဲ။
Edit ကို: Denny　2019-12-11　မိုဘိုင်း
ပထမ ဦး စွာအစိုင်အခဲသစ်သားကြမ်းပြင်
ပြောစရာမလိုပါ၊ အစိုင်အခဲသစ်သားကြမ်းခင်းများသည်အိမ်များတွင်အမြဲလိုလိုဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော်လည်းလူများစွာသည်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျကြသည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ယ်သောအခါစျေးနှုန်းပြproblemနာကိုမြင်ရုံသာမက၎င်း၏အားသာချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝမှဓါတ်ရောင်ခြည်၊ formaldehyde နှင့်အခြားပြproblemsနာများမရှိဘဲသဘာဝမှတိုက်ရိုက်ယူသည်။ ဒုတိယအချက်မှာဆောင်းရာသီတွင်ပူနွေး။ နွေရာသီတွင်အေးမြ။ ကြာရှည်ခံ။ ကြာရှည်ခံ။ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးသက်တမ်းရှည်သည်။ ယင်းကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့်။
၎င်းသည်အစိုင်အခဲသစ်သားသစ်သားကြမ်းပြင်ဖြစ်စေ၊ သစ်သားကြမ်းပြင်ဖြစ်စေဖြစ်စေ၎င်းတို့တွင်တူညီသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် formaldehyde ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့များပါ ၀ င်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပေါင်းစပ်ကြမ်းပြင်သည်ကော်အားအလွှာများဖြင့်ကပ်ထားရန်လိုအပ်သည်။ အိပ်ခန်းထဲမှဤထုတ်ကုန်များသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
၀ ါးနှင့်သစ်သားကြမ်းခင်းများသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရေပန်းစားလာသည်။ ၎င်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ သဘာဝလတ်ဆတ်မှု၊
1. ရိုးရာအစိုင်အခဲသစ်သားကြမ်းခင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရွယ်အစားသည်ကြီးမားသည်။ 2. အမျိုးမျိုးသောသဘာဝသစ်သားအစေ့များသို့မဟုတ်အတုပုံစံများ, ပုံစံများနှင့်အရောင်များကိုတူအောင်နိုင်သည့်အရောင်များအမျိုးမျို...